कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ नयाँ नियम, बीचैमा काम छाडेर फर्किए फेरि जान नपाइने
बीचैमा काम छाडेर फर्कने क्रम बढेपछि नयाँ नियम ल्याएको कोरिया सरकारको दाबी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाली कामदारका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
यो नियम अनुसार अब दोस्रो पटकको वर्किङ भिसामा उल्लेख भएको समय पूरा नगरी बीचैमा काम छाडेर फर्किने कामदारका लागि तेस्रोपटक कोरिया जानै नपाउने भएको छ ।
दक्षिण कोरिया सरकाले दाबी गरे अनुसार कामदारले बीचमै कोरिया छाडेर फर्कने क्रम बढेपछि यस्तो नियम ल्याएको हो ।
अब आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी वर्क पर्मिट क्यान्सिल गरेर फर्कने कामदारलाई भन् यसले मर्का पर्ने निश्चित छ ।
नेपालस्थित इपिएस कोरिया शाखाका अधिकृत शोभाकर परजुलीका अनुसार दोस्रो कार्यकाल पूरा नगरी फर्किने कामदारले तेस्रो पटक कोरिया जान नपाउने गरी यो नियम लागू भएको हो ।
उनले भने, ‘अब सिभिटी परीक्षा दिएर कोरिया गएकाले बीचमै भिसा क्यान्सिल गरेर आएउन नमिल्ने यो नियमले बताउँछ । त्यसपछि फेरि भाषा परीक्षा दिन पनि पाउने छैनन् ।’
उनले भने, ‘तर, बिदामा फर्कनेका हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन ।’
जागिर नै छाडेर फर्किनेलाई कोरियाले अब अर्को मौका नदिने भएको हो । नेपालबाट अहिलेसम्म इपिएस भाषा परीक्षा दिएर ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कोरियामा कार्यरत छन् ।
कस्तो हो तेस्रो पटक भनेको ?
नेपालबाट कोरिया काम गर्न जानेहरुका हकमा पहिलो पटक भाषा परीक्षा पास गरेर गएकाले ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउने गरेका छन् ।
दास्रोपटक कम्प्युटरमा आधारित भाषा परीक्षा दिएर अर्को ४ वर्ष १० महिनाको लागि जान पाउने नियम छ ।
कोरिया सरकारले जारी गरेको नियम अनुसार दोस्रोपटक जानेहरु बीचमै विभिन्न कारण देखाउँदै काम छाडेर फर्किने र फेरि भाषा परीक्षा दिएर कोरिया जाने गरेको पाइएकाले यसलाई रोक लगाउन यो नियम लगाएको इपिएस शाखाले बतायो ।